Umuntu usengaze aboshelwe ukuya elavathi ngenxa ye-corona - Ilanga News
Home Izindaba Umuntu usengaze aboshelwe ukuya elavathi ngenxa ye-corona
Umuntu usengaze aboshelwe ukuya elavathi ngenxa ye-corona
UHAMBO lokuya ezitolo uyothenga ukudla seluphenduka isigameko esisabisayo, futhi obonayo nje ukuthi singenza umehluko phakathi kokufa nokuphila.
Uma kuphela okuthile esiqandisini noma emakhabetheni, uyabikelwa. Uthi uphuma ngesango, uqalaze macala onke, sengathi uzobona uKholona namanye amagciwane akubo bekulindile ngaphandle.
Uphinde uqalaze namaphoyisa futhi ngoba ayakubophela ukuthi uphumile esangweni.
Uma uwatshela ukuthi uya ezitolo, akubuze ukuthi siphi isiliphu. Uxakeke nje ukuthi ubuzosithola kanjani isiliphu ungakafiki nokufika esitolo, kanti-ke iningi lamaphoyisa liqinelwa ngama-khanda, likuvalela esitokisini.
Noma-ke uthe wahlangana nalawa anabo ubuchopho kancane, uzithola usenkingeni uma kade uyothenga espaza ngoba phela kasikho esinomshini okhipha iziliphu.
Wona abambe elentulo, lapho izikhulu zawo zawatshela ukuthi uma umuntu ethi uphuma ukuyogilosa kumele afune isiliphu, uma engenaso, ambophe.
Ngikhuluma nje, ukhona owesifazane oboshwe ephethe isinkwa nepheshana le-airtime, akuthenge espaza.
Uze wafaka isithombe sakhe kwi-social media esakuphethe lokhu kokubili nencwadi yasenkantolo ethi kuyomele ayovela ngaleli cala lokuyothenga kodwa angabi nesiliphu.
Sengiyabona nje ngamehlo engqondo emiswa lo sisi.
Phoyisa: “Uphumaphi njengoba kuthiwe abantu mabahlale emakhaya?”
Sisi: “Kade ngiyothenga isinkwa ne-airtime.”
Phoyisa: “Veza isiliphu.”
Sisi: “Lezi zinto ngizithenge espaza, abanawo umshini weziliphu.”
Phoyisa: “Thina sizokwazi ka-njani ukuthi ubuyothenga nge-mpela njengoba usho?”
Sisi: “Nazi nje lezi zinto ebengiyozithenga, nawe uyazibona.”
Phoyisa: “Uma ungenaso isiliphu, siyakubopha, usuyochazela imantshi, ngena evenini”.
Kuthi uma isihlobo salo sisi sithi siyomkhipha ngebheyili, naso siboshwe futhi ngoba singenaso isiliphu sasenkantolo.
Kunzima lapha ngaphandle. Noma ube nenhlanhla wangaboshwa waze wafika ezitolo, uzithola ususho umthandazo omncane, uthandazela nje ukuthi kungenzeki udinge indlu encane.
Phela yilapho amagciwane ebusa khona, wena owabona amaRoma ngenkathi esaphethe umhlaba wonke. Uthi ungena nje, uwabone esemoyizela ekuqhweba ngomunwe, ethi: “Zwakala nganeno,” kwazisholo uRay Phiri wazigodukela waya kwaJesu.
Izindlu zangasese ezisetshenziswa wumphakathi kaziphephile ngokwempilo ngoba uhlala lapho obekuhlezi khona izinqa ezahlukene.
Ngakho-ke ucoshacosha amagciwane emijulukweni yemisinsila enhlobonhlobo. Iningi lethu like lithathe i-toilet paper, liyendlale phezu kwesihlalo ngaphambi kokuba lihlale lenze umsebenzi elawunikwa nguMvelinqangi. Inkinga iba khona uma uyothenga kula ma-mall aseqophelweni eliphezulu.
Uthola yonke into ingenasibambo, isebenza ngamadlozi; ompompi, imishini ekhipha i-toilet paper, ekhipha iphepha lokusula izandla nekhipha insipho yoku-geza izandla futhi nezihlalo zakhona zobukhosi zizikhiphela zona amanzi okuhambisa indle.
Uthi uma usondeza isandla emshinini we-toilet paper, uvele ukukhiphele ucweshana nje olungeke lusule ngisho izinqa zentuthwane lezi.
Uma uthi uyasisondeza futhi isandla kungaphumi lutho ngoba umshini uyabona ukuthi kusenguwe lona. Kuthi uma uhlehla, amane athi wohlo amanzi okuhambisa indle.
Kuphela ihora udlala umaca-shelana nemishini endlini encane, uphuma lapho usukhohlwe nokuthi ubuyothengani.
Uthi uphumela ngaphandle uhlangane nephoyisa, likufune isiliphu esiwubufakazi bokuthi ngempela ubuyozikhulula. Kube uyaboshwa njalo.
Previous articleKumsizile ukujima uzime ongudokotela
Next articleUMboweni uthi ngeke kube lula ukuvuka komnotho wakuleli